आज (बिहीबार) खुल्दैछ यी ५ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल - Dainik Plus info
Home / Rashifal / आज (बिहीबार) खुल्दैछ यी ५ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
आज (बिहीबार) खुल्दैछ यी ५ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
काठमाडाैं l २२, पुस २०७८ । ६, जनवरी २०२२ बिहीबार । पौषशुक्लपक्ष चर्तुथी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, सिद्धि योग, विष्टि करण, चन्द्रमा कुभ्म राशिमा छ । आज सूर्योदय बिहान ६ बजेर ५७ मिनेटमा भएकाे छ भने सूर्यास्त १७ः२२ मा हुनेछ।
आज दिउसो १ः२८देखि २ः४७ सम्मको समय राहुकाल रहेको छ । ११ः४९ देखि १२ः३० सम्मको समय अभिजित मुहूर्त रहेको छ । राहुकालको समयमा शुभ कर्म नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
मीन (दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) : बिहीबारका दिन मीन राशिमा जातकले विहान सूर्योदयको दर्शन गरेर नजिक वा देवालयको दर्शन गर्नु उत्तम हुनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रका कार्य गर्ने मीन राशि भएका ब्यक्तिले आजको दिन कुनै नयाँ पुस्तक पठन र लेखनका काम गर्नसक्नुहुन्छ । विद्यार्थका लागि विहीबारको दिन कुनै काम शुरु गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ।